Xildhibaanada Golaha Shacabka oo u yeeray Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya – Bandhiga
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo u yeeray Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya
Axmad Ciise Cawad Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa looga yeeray fadhiga Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaana mudanayaasha ay doonayaan inay su’aalo weydiiyaan.
Xildhibaanada ayaa waxay sheegeen inay doonayaan in Wasiirka Arrimaha Dibadda uu hortooda yimaado, si ay wax kaga weydiiyaan warbixintii uu daabacay Wargeyska The New York Times, ee la xiriirta arrinta Dowladda Qatar.
Warbixinta New York Times ayaa waxaa lagu sheegay in Dowladda Qatar ay ku lug leedahay qaraxyo ka dhacay Magaalada Boosaaso, iyadoo uu ujeedku yahay sidii Emirate-ka looga saari lahaa Dekeda Boosaaso.
Wasiir Cawad oo arrintaasi ka hadlay ayaa mar sii horeysay sheegay in warka lagu daabacay Wargeyskaasi uu yahay mid looga been abuuranayo Dowladda Qatar.
Hadaba Guddiga Arrimaha Dibadda ee Baarlamaanka Somaliya oo kulan la yeeshay Wasiir Axmed Ciise Cawad ayaa waxay sheegeen inaysan ku qancin jawaabaha uu siiyay, sidaasi darteedna ay ugu yeerayaan inuu horyimaado Golaha Shacabka.
Wasiir Cawad ayaa waxaa lagu haystaa in uu shaqaaleysiiyay 12 qof oo ay isu ehel yihiin, in uu saxiixay heshiisyo aan Baarlamaanka la soo hormarinin iyo arrinta ku aadan Dowladda Qatar.